Wararka - Hab nololeedka tayada sare leh ee ugu wanaagsan ee xayawaanka guryaha lagu haysto
Dunida waxaa ka jira noocyo badan oo xayawaan ah, oo qaarkood ay bini aadamku korsadaan oo ay noo raacaan si aan ugu noolaano xubin qoyska ka mid ah. Kordhinta tirada xayawaanka guryaha ku jira, cunitaanka xayawaanka ayaa sidoo kale kor u kacaya. Sidee loo doortaa badeecad qiimo jaban oo habboon oo loogu talagalay xayawaanka guriga jooga? World ururinta dhaqtarka xoolaha ee soo saaraha sahayda xayawaanka (ha la mid noqoto aniga oo ah sarkaalka qashin saarka) jawaabta adiga.
Haysashada xayawaanku waxay noqon kartaa ganacsi aad u dulqaad badan, kaliya in la xuso bisadaha xayawaanka ee ugu caansan, quudinta eygu waa barasho weyn. Dhammaan noocyada maacuunta xayawaanka ah, sida xadhigga, weelka cuntada, jiifka, alaabta carruurtu ku ciyaarto, qubeyska iyo agabyada kale ee xulashada iyo iibsiga, waxaan aaminsanahay in asxaab badani ay madax xanuun badan yihiin. Ka hor intaadan iibsan sahayda xayawaanka, tixgeli qodobbada soo socda:
1.Xulashada xayawaanka ee u gaarka ah
Ugu horreyntii, milkiilayaasha qaarkood waxay ka walwalaan in dhadhanka cuntada eeyga ay isku mid yihiin, ka dibna ay doortaan qaar eeyaha cunnada eyga ah ma jecla, wax badan ma cuni doonaan, iyagoo wax u dhimaya caafimaadka eeyga. Xaqiiqdii, dhadhanka ey kasta oo uu jecel yahay wuu ka duwanaan karaa. Waxaan mararka qaarkood iibsan karnaa dhadhan kale si aan isugu dayno, oo aan u daawanno falcelinta eeyga si aan u go'aamino dhadhanka uu jecel yahay.
2.Nabada maskaxdu wax dhib ah maleh
Nabadgelyadu waa aasaaska aasaasiga ah ee xulashada alaabada xayawaanka, sida qaar ka mid ah saxamada cuntada, barkadaha shimbiraha, haddii isticmaalka haraaga kiimikada uu ka sarreeyo heerka, ama uu saameyn xun ku yeesho qalabka caafimaadka xayawaanka si loo sameeyo, dabcan, tan lama oggola. Intaas waxaa sii dheer, haddii ay alaabtu adag tahay oo ay sii jiri karto, haddii ay jiri doonaan qaybo dhacaya, iwm, sidoo kale waa astaamaha lagu qiimeeyo in badeecaddu ammaan tahay iyo in kale. Haddii dharka xayawaanka qaarkood u nugul yihiin qaybo dabacsan, waxaa si fudud u liqi kara bisad barara xiisaha leh, taas oo keenta xannibaadda marinnada caloosha ee caloosha iyo xitaa neef qabatin ama oof wareen.
Xayawaanku wuxuu keenaa maacuunta: Eyga iyo bisadu waxay si gaar ah ugu kala duwan yihiin maacuunta. Waxay u isticmaalaan maddiibado ballaaran oo cidhiidhi hoose iyo gacmeed hoose si ay uga dhigaan kuwo jilicsan. Si loo doorto noocyada kala duwan ee cuntada, waxaan haynaa noocyo kala duwan oo balaastiig gaar ah, bir bir ah, dhoobada iyo waxyaabo kale oo kala duwan.
Si loo ilaaliyo bisadaha iyo eyda isticmaaleysa, waqtiga quudinta xayawaanka si taxaddar leh, sida daroogooyinka qaarkood ay siin karaan eyda loo isticmaalo, laakiin sun ayey ku tahay bisadaha, sida deltamethrin oo si ballaaran loogu isticmaalo shilka eyga, boodada, dilka kaneecada iyo ka hortagga , laakiin bisadu inay sun noqoto, sida: "eeyaha iyo bisadaha guud" barokaca silsiladaha boodada ah ayaa sun ku noqon kara bisadda;
Kooleeti Fleas eey yaryar /Dabaysha xayawaanka bisadaha xayawaanka ah /Dareeraha jilicsan ee eeyaha waaweyn
Marka aadan aqoon nooca aad ku kalsoon tahay iyo nooca aad jeceshahay inaad iibsato, fadlan la xiriir xirfadlaha caafimaadka xoolaha ee soo saaraha alaabta xayawaanka Tianxia Hui si aad isula jaanqaado. Tilmaamaha taranka ee dhammaan noocyada eeyaha iyo heerarka xulashada iyo xeeladaha cunnada eyga waa la dhammaystiray. Tixraacaaga iyo barashadaada, ha kuu daayaan habka lagu hayo xayawaanka si aad uga fogaato inaad ku timaado onkodka.
Noocyada xayawaanka ee kala duwan waxay leeyihiin baahiyo kaladuwan oo alaabada ah. Tusaale ahaan, eeyo kaladuwan oo kaladuwan waxay ubaahanyihiin nafaqooyin kaladuwan marka ay yaryihiin iyo marka ay weynaadaanba. Haddii aadan sameynin xulashada saxda ah, waxay u badan tahay in eeygaagu uusan heli doonin nafaqooyin ku filan inta uu korayo, taasoo saameyn ku yeelanaysa cabirkiisa iyo caafimaadkiisa qof weyn.
Markaad leedahay eeyo dhexdhexaad ah sida huskies, fardars iyo Samoyees ee gurigaaga, waa inaad fiiro gaar ah siisaa xulashada cuntada eeyga ee carruurnimadoodii hore, fiiro gaar ah u yeelo dheelitirka nafaqada oo si dhib yar loo calaliyo, qaadashada nafaqada wanaagsan ayaa habboon koritaanka qaabka jidhka iyo caafimaadka timaha.
Eeyadu sidoo kale waxay jecel yihiin noocyo kala duwan oo carruurtu ku ciyaaraan, mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad yeelato afar ama shan alaabood markiiba, oo isbadbadal ku samee toyyada kala duwan toddobaad kasta. Tani waxay xiisaha xayawaankaaga sii hayn doontaa. Haddii xayawaankaagu ay jecel yihiin qalab gaar ah, waxay u badan tahay inaysan fiicnayn in la beddelo.
Eeyadu way fududahay in la la'yahay fiitamiinno ama waxyaabo raadraac ah, waxqabadka ugu weyn ee sabab la'aan in la cuno walxaha, ama xitaa la jeexjeexo taayirada cudbiga ah. Si uu u qanciyo rabitaankiisa, marka laga soo tago siinta cuntada uu u baahan yahay inuu calaliyo, wuxuu u diyaarin karaa xoogaa toy ah eeyga. Qoryaha alwaaxa iyo caag aan sun ahayn ayaa laga baaraandegi karaa qaababka lafaha ama qaabab kale.
Bisaduhu waa dabeecad ahaan dabeecadaha, looxyada xoqan ee lagu rusheeyey catgrass ayaa ka hortagi doona inay waxyeeleeyaan alaabta guriga. Intaas waxaa sii dheer, howlaha baacsiga ah ee sheyga waa eey caan ah oo hiwaayad ah, noocyo kala duwan oo duubmi kara kubada, xarigga ayaa socon doona, riix guga ayaa ruxaya alaabada yar yar ee ciyaarta iyaga ayaa u oggolaan doonta iyaga oo aad u faraxsan.
Tianxia Hui xayawaanka lagu ciyaaro waxay ka samaysan yihiin waxyaabo kala duwan, oo leh cimri dherer kala duwan. Marka, kahor intaadan u iibsan caruusad xayawaankaaga, waxaad u baahan tahay inaad fahamto dabeecadaha qaniinyada xayawaankaaga si aad u doorato toy ku habboon oo isaga u habboon.
Polyethylene iyo alaabta carruurtu ku ciyaaraan ee cinjirka ah
1 Polyetylenku waa u jilicsan yahay sida caagga caruurtu ku ciyaarto waxaana loo sameeyaa midabyo kala duwan. Qaarkood xitaa wey cabaadayaan si ay tooydu u noqoto mid xiiso badan. Qalabka caruurtu ku ciyaaraan ayaa guud ahaan ku habboon eeyaha aan caado u lahayn qaniinyada gardarrada ah. Kuwaas waxaa ka mid ah, xayawaannada ku jira alaabta carruurtu ku ciyaarto ee estrus, oo aad ugu adkaysata qaniinyada, gaar ahaan ku habboon xayawaannada ku jira qaraxa estrus temper, waxay leeyihiin saameyn aad u wanaagsan oo nasteexo leh, u oggolow xayawaankaaga inay ku raaxaystaan ​​baashaalka nolosha.
Qalabka eyga ee Rubber iyo Nylon
Qalabka caagga ah ee jilicsan iyo naayluhu waa kuwo waara oo ku habboon eeyaha leh caado qaniinyo dhexdhexaad ah. Alaabta carruurtu ku ciyaaraan badanaa waxay leeyihiin godad iyaga ka mid ah si ay uga dhigto madadaalo eyda jecel inay wax cunaan.
Xarig eyga ayaa qaniinay toy
Qalabka xadhiga lagu ciyaaro badanaa waxaa laga sameeyaa nayloon ama cudbi waxayna ku habboon yihiin eeyaha leh caadooyinka qaniinyada qunyar-socodka ah. Tani waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay eyda jecel inay ciyaaraan jiitaa iyo hoos udhaca ciyaarta, iyo jilicsanaanta, jilicsanaanta aan adkeyn ayaa sidoo kale ufiican ilkahooda.
Toy jilicsan eeyaha
Alaabada carruurtu ku ciyaarto ee jilicsan ayaa jilicsan oo fudud, oo ku habboon kuwa jecel inay jiidaan alaabada ay ku ciyaaraan, maaha kuwa jecel inay wax cunaan.